Mpanamboatra sy mpamatsy kojakoja fametahana lafaoro - Orinasa famokarana lafaoro China
Fanohanana varavarana lafaoro fandrahoan-tsakafo
Fampidirana: Fanohanana varavarana lafaoro fandrahoan-tsakafo. Ny fanohanana am-baravarana ankavia sy havanana amin'ny lafiny roa dia tsiroaroa. Ampiasaina amin'ny lafaoro misy herinaratra matetika. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-07
Sarona lafaoro vilia fandrahoan-tsakafo
Fampidirana: Sarona lafaoro vilia fandrahoan-tsakafo. Ny fonosana lafaoro havia sy havanana lafiny roa dia tsiroaroa. Ampiasaina amin'ny lafaoro misy herinaratra matetika. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-19
Model Model: YL-20
Savily famonoana lafaoro famonoana gazy
Fampidirana: Ny sisin-tànana lafaoro eo am-baravaran'ny lafaoro famonoana lasantsy dia ilany 1 Hinge ampiasaina amin'ny varavaran'ny fatana fandrahoan-tsakafo. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-17
Fantsom-bozaka lafaoro fatana tokana tokana
Fampidirana: Fantsona fatana fandrahoan-tsofina sofina tokana sisa tavela amin'ny sisiny havia sy havanana dia mpivady 1. Hinge ampiasaina amin'ny varavaran'ny fatana fandrahoan-tsakafo. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-01
Hazo vy tsy misy fangarony BBQ lafaoro turnpit / fork / roaster
Fampidirana: Hazo vy tsy misy fangarony BBQ lafaoro turnpit / fork / roaster. Fampiasana turnspit amin'ny lafaoro mandeha amin'ny herinaratra. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-18
Sarin-tsarimihetsika lafaoro famonoana lasantsy / cotter lohataona
Fampidirana: Sarin-tsarimihetsika lafaoro famonoana lasantsy / cotter lohataona. Ampiasao amin'ny bisikileta ho an'ny varavarana lafaoro na vata famonosanana. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-11
Vata telozoro vy tsy misy fangarony BBQ lafaoro turnpit / fork / roaster
Fampidirana: Vata telozoro vy tsy misy fatrany BBQ lafaoro turnpit / fork / roaster. Fampiasana turnspit amin'ny lafaoro mandeha amin'ny herinaratra. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-06
Fampidirana: Fantsom-baravaran'ny lafaoro famonoana gasolina avela ny sisiny havia sy havanana dia mpivady 1. Hinge ampiasaina amin'ny varavaran'ny fatana fandrahoan-tsakafo. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-04
Fantsom-baravaran'ny lafaoro fatana kely
Fampidirana: Ny savily kely an'ny vilany fandrahoana solika kely dia avela sy ilany ankavanana dia tsiroaroa 1. Hinge ampiasaina amin'ny varavaran'ny fatana fandrahoan-tsakafo. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-03
Savily indroa masaka vilany fandrahoan-tsofina
Fampidirana:Varavarana fandrahoan-tsolika indroa sofina indroa varavarana lafaoro sisa tavela sy ilany ankavanana dia mpivady 1. Hinge ampiasaina amin'ny varavaran'ny fatana fandrahoan-tsakafo. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny tranon-trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
Model Model: YL-02